नेपाल प्रहरीका ७३ सइको इन्सपेक्टरमा बढुवा, को को भए बढुवा ?
काठमाडौं । बैशाख ८ । नेपाल प्रहरीको ७३ सई इन्सपेक्टरमा बढुवा भएका छन् ।
२०६० सालमा सइमा बढुवा ७३ जनाको १५ बर्ष पछि बढुवा भएका हुन् । १ हजार ६१ जनामध्ये उत्कृष्ट ७३ जनालाई बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको बताइएको छ । बढुवाको पहिलो नम्बरमा प्रहरी प्रधान कार्यालय कर्मचारी प्रशासन शाखामा कार्यरत राजेन्द्र थापामगर ९६.२३ नम्बर सहित बढुवा भएका हुन् । त्यस्तै महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुमा कार्यरत प्रज्वल थपलिया ९३.१५ अंक सहित बढुवा भएका छन् । बढुवा भएका मध्य सबै भन्दा अन्तीममा ७३ औं नम्बरमा इलाका प्रहरी कार्यालय रुकुममा कार्यरत सुरेश विक ८८.९२ नम्बर सहित बढुवा भएका हुन् ।
बढुवा सिफारिस समितिले आजै जवानबाट हवल्दारका लागि ४०० जवानको बढुवाका लागि पनि गरिसकेको छ । केही दिनभित्रै इन्सपेक्टरबाट डिएसपीको पनि बढुवा हुने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । सर्वेन्द्र खनाल आइजिपीमा नियुक्त भएपछि उनले तल्लो दर्जाको बढुवा जाम खुलाएका हुन् ।
नेपाल प्रहरीका ८ एसपी र २७ डिएसपीको सरुवा, को कहाँ ?
निजगढ प्रहरीको सक्रियता : दश दिनमा चार फरार प्रतिबादी पक्राउ
नेपाल प्रहरीका एसएसपी राणा माथी महिला हिंसा र र्दुव्यवहार गरेको आरोप
नुवाकोट प्रहरीको सक्रियतामा भेटीएको दुईवटा मोटरसाइकल सम्बन्धीत व्यक्तिलाई हस्तान्तरण